China Umatshini wemaski oMatshini oMatshini oMatshini oMatshini oMatshini oMkhulu weSantya esiphakamileyo sefektri umatshini wokuwelda umatshini mveliso kunye nabenzi | U-Haojing
Umatshini endlebeni tyaba iwelding isetyenziselwa ukuwelda oluzenzekelayo imigca imaski tyaba indlebe. Mnye kuphela umqhubi ofuna ukubeka imaski yomzimba kwisiqwenga kwisixhobo sebhanti yokuhambisa. Zonke ezinye izinto ezenziweyo kwimveliso egqityiweyo zonke ziqhutywa ngokuzenzekelayo ngumatshini. Imveliso umatshini iphezulu kunaleyo band indlebe umatshini iwelding.
Indlela ye-Ultrasonic fusion isetyenziselwa ukudibanisa amacala angaphandle omzimba womaski, kwaye icala elingaphakathi ligqibezela imveliso ezenzekelayo ngokupheleleyo yeemaski zeendlebe zeemveliso. Inempawu zamandla aphezulu e-welding eemaski zentloko, ukusebenza ngokukuko komsebenzi, ukusebenza ngokulula kunye nomgangatho ozinzileyo.
Izixhobo zisebenzisa izixhobo ezaziwayo, ezinje ngeSchneider, i-Nokia kunye neAirTAC njalo njalo. Sinokutshintsha iindawo zeempawu ngokweemfuno zabathengi.
Izixhobo ze-ultrasound zisebenzisa iimveliso ezaziwayo zasekhaya, ezingenakuqinisekisa kuphela ubomi benkonzo ye-ultrasound, kodwa zenze nomphumo wokutywinwa komphetho ube mhle.
Amandla e-Ultrasonic 2000W
Ukuhamba rhoqo kwe-Ultrasonic 18KHZ
Indlela yokusebenza NGOKUZENZEKELAYO
Imveliso egqityiweyo 3ply MASK
Ukunikezwa amandla AC220v ± 5% .50HZ ± 1%
Umthamo Iifayile ezingama-80-120 / min
Imowudi yokuhambisa ukuqhuba servo
Cinezela kwaye ujije imaski yeendlebe kwiindawo ezine ngaxeshanye
Isetyenziselwa ukusika iintambo zendlebe kunye nokusebenza ngomoya oxineneyo
Unokwenza izixhobo zokudibanisa ngokukhawuleza
Egqithileyo China Umatshini weMask Servo uMthengisi weFlat yoBuso boMatshini oMatshini oMatshini oMatshini oMnyama
Okulandelayo: Umatshini wokugoba we-OEM we-3ply china umatshini wemaski ethe tyaba
Isigqumathelo Welding Machine
OEM imaski Machine 3ply china imaski tyaba umatshini H ...
China Umatshini weServo weMask kuMthengisi weFlat Face Mas ...